အလုပ်အမှုဆောင်ခရီးသွားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Des Moines, အာရဇ်ပင် Rapids, Davenp သို့မဟုတ် t, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးအိုင်အိုဝါ Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 877-647-9100 စီးပွားရေးအဘို့သင့်ဧရိယာတဝိုက်ဗလာခြေထောက်ပျံသန်းမှု, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျအိုင်အိုဝါမှာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျအိုင်အိုဝါဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီချက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အချည်းနှီးသောပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
အတွက် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထုတ်စစ်ဆေး အိုင်အိုဝါ.
Ames, အိုဝါ အာရဇ်ပင် Rapids, အိုဝါ Dubuque, အိုဝါ Mason ဆိုစီးတီး, အိုဝါ
Ankeny, အိုဝါ ကလင်တန်, အိုဝါ ဝိန်း Fort Dodge, အိုဝါ Sioux City, အိုဝါ
Bettendorf, အိုဝါ ကောင်စီဖြီး, အိုဝါ အိုင်အိုဝါစီးတီး, အိုဝါ Urbandale, အိုဝါ
ဘာလင်တန်, အိုဝါ Davenp သို့မဟုတ် t, အိုဝါ မာရီယန်, အိုဝါ Waterloo, အိုဝါ
အာရဇ်ပင်ရေတံခွန်, အိုဝါ des Moines, အိုဝါ Marshalltown, အိုဝါ အနောက် Des Moines, အိုဝါ
အာရဇ်ပင် Rapids CID CID KCID အရှေ့အိုင်အိုဝါလေဆိပ် P-S က 520,360
des Moines DSM DSM KDSM Des Moines အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-S က 1,079,189
Dubuque DBQ DBQ KDBQ Dubuque ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 33,465
Sioux City SUX SUX KSUX Sioux Gateway မှာလေဆိပ် (ဗိုလ်မှူးကြီး. ဖူးအငုံထွက်နေ့ဖျော်ဖြေမှု) P-N ကို 25,313
Waterloo အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် Kalo Waterloo ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 20,984
ဘာလင်တန် BRL BRL KBr အရှေ့တောင်အိုင်အိုဝါဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် CS 6,439
ဝိန်း Fort Dodge သော်လည်း သော်လည်း KFOD ဝိန်း Fort Dodge ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် CS 3,083
Mason ဆိုစီးတီး MCW MCW KMCW Mason ဆိုစီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် CS 3,188
Ankeny IKV IKV KIKV Ankeny ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် R ကို 10
Albia 4C8 Albia စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Algona AXA AXG BOX Algona စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Ames AMW AMW KAMW Ames စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 275
အတ္တလန္တိတ် AIO AIO KAIO အတ္တလန္တိတ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Audubon ဒူ အချို့သော Audubon ကောင်တီလေဆိပ် (Audubon စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA
Belle Plains TZT KTZT Belle Plains စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Bloomfield 4K6 Bloomfield စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Boon BNW BNW KBNW Boon စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ကာရိုး ကို C ကို C KCIN အာသာ N ကို. Neu လေဆိပ် GA 1
Centerville TVK KTVK Centerville စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Chariton CNC KCNC Chariton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ချားလ်စ်စီးတီး CCY CCY KCCY အရှေ့မြောက်အိုင်အိုဝါဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ချားလ်စ်စီးတီးစည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA
ခြာရိုကီ CKP KCKP ခြာရိုကီကောင်တီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (ခြာရိုကီစည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA
Clarinda ICL ICL KICL Schenck ဖျော်ဖြေမှု GA
ဖိ CAV KCAV ဖိစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ကလင်တန် CWI CWI KCWI ကလင်တန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
ကောင်စီဖြီး CBF CBF KCBF ကောင်စီဖြီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Creston CSQ CSQ KCSQ Creston စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 9
Davenp သို့မဟုတ် t DVN DVN KDVN Davenp သို့မဟုတ် t စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
Decorah DEH DEH KDEH Decorah စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Denison DNS ကို DNS ကို KDNS Denison စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 6
Emmetsburg EGQ KEGQ Emmetsburg စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Estherville IS IS Kest Estherville စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဖဲရ်ဖီးလ်က FFL FFL FFL ဖဲရ်ဖီးလ်ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ် GA
သစ်တောစီးတီး FXY FXY KFXY သစ်တောစီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဝိန်း Fort Madison FSW FMS KFSW ဝိန်း Fort Madison စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 26
Greenfield GFZ KGFZ Greenfield စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Grinnell Grgi KGGI Grinnell ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Grinnell စည်ပင်သာယာခဲ့သည်) GA
Guthrie ရေးစင်တာ GCT KGCT Guthrie ကောင်တီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA
Hampton HPT HPT KHPT Hampton စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Harlan HNR KHNR Harlan စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Humboldt 0K7 HUD Humboldt စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
လွတ်လပ်ရေး IIB KIIB လွတ်လပ်ရေးနေ့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
အိုင်အိုဝါစီးတီး IOW IOW KIOW အိုင်အိုဝါစီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 5
အိုင်အိုဝါရေတံခွန် IFA IFA KIFA အိုင်အိုဝါရေတံခွန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဂျက်ဖာဆန် EFW EFW KEFW ဂျက်ဖာဆန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Keokuk Eok Eok cluck Keokuk စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 33
နို့ OXV KOXV နို့စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Lamoni LWD KLWD Lamoni စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
le အင်္ဂါဂြိုဟ် LRJ LRJ KLRJ le အင်္ဂါဂြိုဟ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Mapleton Mey KMEY ဂျိမ်း, G. White သတိရအောက်မေ့ဖျော်ဖြေမှု GA
Maquoketa OQW KOQW Maquoketa စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Marshalltown mỉw mỉw KMIW Marshalltown စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Monticello MXO MXO KMXO Monticello ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 4
တောင်ပေါ်ကသာယာသော MPZ MPZ MPZ တောင်ပေါ်ကသာယာသောစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 9
Muscatine MUT MUT KMUT Muscatine စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 3
နယူတန် ဥပဒေကြမ်း ဥပဒေကြမ်း KPEA နယူတန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 26
Oelwein OLZ KOLZ Oelwein စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
လိမ္မော်ရောင်စီးတီး ORC KORC လိမ္မော်ရောင်စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Osceola I75 Osceola စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Oskaloosa OOA OOA ကတော် Oskaloosa စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Ottumwa OTM OTM KOTM Ottumwa ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Ottumwa စက်မှုလေဆိပ်ခဲ့သည်) GA 127
Pella PEA KPEA Pella စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 3
ပယ်ရီ PRO PRO KPRO ပယ်ရီစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Pocahontas Poh Poh KPOH Pocahontas စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
ဧဒုံ Oak RDK KRDK အနီရောင် Oak စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 6
Rockwell စီးတီး 2Y4 Rockwell စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
sac စီးတီး နှငျးလြှော KSKI sac စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Sheldon SHL KSHL Sheldon စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Shenandoah SDA KSDA Shenandoah စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Spencer SPW SPW KSPW Spencer စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 1
မုန်တိုင်းရေကန် SLB SLB KSLB မုန်တိုင်းရေကန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 1
Tipton 8C4 Mathews သတိရအောက်မေ့လေဆိပ် GA 2
Vinton VTI KVTI Vinton စစ်ပြန်သတိရအောက်မေ့ Airpark GA
ဝါရှင်တန် AWG END သည် ဝါရှင်တန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 11
Waverly C25 Waverly စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 19
Webster စီးတီး EBS EBS kEBS Webster စီးတီးစည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
အနောက်ပြည်ထောင်စု 3Y2 ဂျော့ခ်ျက L. Scott စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA
Winterset 3Y3 Winterset စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Winterset-Madison ကောင်တီခဲ့သည်) GA
Ackley 4C7 Ackley စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Allison K98 Allison စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Amana C11 Amana လေဆိပ်
Anita Y43 Anita စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Kevin Burke ကသတိရအောက်မေ့ဖျော်ဖြေမှု)
Bedford Y46 Bedford စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Belmond Y48 Belmond စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Corning CRZ KCRZ Corning စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Corydon 0E9 Corydon လေဆိပ်
Cresco CJJ KCJJ Ellen ဘုရားကျောင်းဖျော်ဖြေမှု
des Moines Y76 Morningstar ဖျော်ဖြေမှု
Dyersville IA8 Dyersville ဧရိယာလေဆိပ်
လင်းယုန် Grove EAG KEAG လင်းယုန် Grove စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Eldora 6C0 Eldora စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်း)
Elkader I27 Elkader လေဆိပ်
Grundy ရေးစင်တာ 6K7 Grundy Center ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ်
Hawarden 2Y2 Hawarden စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (အပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်း)
Ida Grove IDG IDG KIDG Ida Grove စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Keosauqua 6K9 ကို Keosauqua စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ရေကန် Mills က 0Y6 ရေကန် Mills ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ်
Larchwood 2VA သို့ Zangger Vintage Airpark
မန်ချက်စတာ C27 မန်ချက်စတာစည်ပင်သာယာလေဆိပ် 4
မာရီယန် C17 မာရီယန်လေဆိပ်တွင်
Milford 4D8 ခဝါသည်လေဆိပ်
Monona 7C3 Monona စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Montezuma 7ဂ5ပြောရမည်မှာဖျော်ဖြေမှု
တောင်ပေါ်က Ayr 1Y3 တောင်ပေါ်က Ayr စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (တရားသူကြီး Lewis ကဖျော်ဖြေမှု)
နယူး Hampton 1Y5 နယူး Hampton စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Northwood 5D2 Northwood စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Onawa K36 Onawa စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Osage အဘိဓါန် D02 Osage အဘိဓါန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Paullina 1Y9 Paullina စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Postville Y16 Dale မွေ့လျော်လေဆိပ်
Primghar 2Y0 Primghar လေဆိပ်
Radcliffe 2Y1 Drake လေဆိပ်
ရော့ခ် Rapids RRQ KRRQ ရော့ခ် Rapids စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Sibley ISB KISB Sibley စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Sioux ရေးစင်တာ soy KSOY Sioux Center ကမြူနီစီပယ်လေဆိပ်
ဝိညာဉ်တော်သည်ရေကန် 0F3 ဘန်ဝစ် ဝိညာဉ်တော်သည်ရေကန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် 1
ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးရေးဖွဲ့ထားပါတယ် 8C2 ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးရေးဖွဲ့ထားပါတယ်စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Toledo 8ဂ5Toledo စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
ယူလာ 8C6 စည်ပင်သာယာလေဆိပ်ယူခဲ့
Waukon Y01 လျော်ကြေးငွေ Waukon စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Woodbine 3Y4 Woodbine စည်ပင်သာယာလေဆိပ်
Guttenberg IA23 gaa ပုဂ္ဂလိကလေဆိပ် 3
Hartley 0Y4 လမ်းဘတ် Fechter စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2008?) 
မြို့ရိုးကိုရေကန် 3Y0 မြို့ရိုးကိုရေကန်စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 2005/2006?) 
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wisconsin ပြည်နယ်ငှားရမ်း | ပဋိညာဉ်စာတမ်းလေယာဉ် Des Moines